19W | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
18W နှင့် 19W တို့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းများဖြစ်လုနီးပြီ
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်ပိုင်းမှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 18W နှင့် 19W တို့သည် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ 0600GMT နောက်ပိုင်း(မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၉ ရက် – နေ့လည် ၁၂း၃ဝ နာရီနောက်ပိုင်း) တွင် ပိုမိုအားကောင်းလာကာ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းများ အဖြစ်သို့ အသီးသီး ရောက်ရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အောက်ဖေါ်ပြပါ ပုံများအတိုင်း ဆက်လက်ရွေ့လျားကြမည်ဖြစ်ကြောင်း JTWC ခန့်မှန်းချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
၄င်းတို့အနက် 19W သည် လာမည့် ၇၂ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းသို့ စတင် ခြိမ်းခြောက်လာဘွယ်ရာရှိပြီး၊ 18W မှာ လာမည့် ၉၆ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းသို့ စတင်ခြိမ်းခြောက်နိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်းခန့်မှန်းထားပါသည်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KETSANA နှင့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းများဖြစ်ကြသော 18W, 19W တို့အား ဆက်လက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ၍ ရှိသော သတင်းများကိုဆက်လက်တင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပုံတစ်ခုလုံးကို ကြည့်ရန် ပုံပေါ်တွင် click လုပ်ပါ
Posted in Education, Weather News. Tags: 18W, 19W, tropical-depression, weather. LeaveaComment »